/Blog/Gallery/Indlela Yokusebenzisa I-Trenbololone Recipe Yokuxuba I-Trenbolone Inanthate Powder 2019
Posted on 05 / 21 / 2019 by UDkt Patrick Young wabhala ku Gallery.
Iyini i-Trenbolone Enanthate?
I-Trenbolone E (i-trenbolone enanthate) ingenye ye-steroids engase ihlukaniswe njengezithako ezinamandla ezenezela emzimbeni wesisipha. Nakuba ekuqaleni kwasetshenziselwa ukukhula kwemisipha ezilwaneni, isidingo saso phakathi kwabalimi bomzimba sakhulile ngaphezu kweminyaka ngenxa yokusebenza kwayo ekukhuleni kwamasipha.
I-Tren E (i-Trenbolone enanthate) yiyona ndlela eside kakhulu eqinisekisiwe ye-trenbolone futhi inezinga lokubamba isikhathi eside. Ngenxa yalokho, izinga lapho likhishwa khona emzimbeni liphuza futhi. Unemizuzu engamatshumi ayishumi nambili, okwenza kube nesikhathi esinqunyiwe. Kodwa-ke, isigamu-ukuphila eside, kunomthelela ekusebenzeni isikhathi eside kakhulu sezingane.
Indlela sebenzisa iresiphi ye-trenbolone ukuxuba i-trenbolone enanthate powder
Izithako okudingeka uzilungiselele
I-Trenbolone Enanthate iresiphi
I-100mg / mL iresiphi ye-Trenbolone Enanthate ye-100mL
I-10g i-Trenbolone enanthate powder (7.5mL)
I-5mL Amafutha okugcoba
I-3mL ne-20mL / 60ml iseringeni ene-18-21 inaliti yesilinganiso
I-trenbolone i-Ananthate ikhefu ngesinyathelo ngesinyathelo
-Step 1: Gubungula i-steroid i-trenbolone enanthate powder
-Step 2: Engeza i-trenbolone powder, i-BA, ne-BB ibe yi-beaker
-Step 3: Sishisa i-beaker emanzini okugeza
-Step 4: Engeza amafutha aqoshiwe
-Step 5: Ukuhlunga
-I-6 ye-Stepthi: Beka ama-caps ama-caps
Isinyathelo 1: Gubungula i-steroid i-trenbolone enanthate powder
Sebenzisa i-trenbolone enanthate iresiphi yokwenza amafutha e-trenbolone enantahte, isinyathelo sokuqala osithathayo ukukala I-Trenbolone Enanthate powder ku-beaker yengilazi. Qinisekisa ukuthi ufinyelela ukunemba kokukhomba ngesikhathi senqubo yokulinganisa ukugwema ukuba ne-Tren Enanthate eningi kakhulu.
Isinyathelo 2: Engeza i-trenbolone i-powder, i-BA, ne-BB ibe yi-beaker
Futhi engeza i-Benzyl Benzoate (BB) ne-Benzyl Alcohol (BA) bese uvuselela. I-Trenbolone eluhlaza iqala ukuchithwa ku-powder. Uma ufuna ukwandisa ukusheshisa kwenqubo, hlola isinyathelo 3.
Isinyathelo 3: Sishisa i-beaker endaweni yokugeza amanzi
Ukushisa i-beaker emanzini okugeza kukhulisa ijubane lenqubo. Amanzi akufanele ashise kakhulu, masibe nemfudumalo ngoba izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lingabangela uketshezi.
Isinyathelo 4: Engeza amafutha aqoshiwe
Engeza amafutha okugcoba afudumele abe yingxube bese uwaxuba kahle. Qiniseka ukuthi ayikho i-hormone swirls ngaphambi kokuqhubekela phambili kuhlelo lokuhlunga. Qiniseka ukuthi phansi kwe-beaker ibonisa kuphela isisombululo se-Trenbolone Enanthate esicacile.
Dweba isixazululo ku-syringe enkulu noma encane (lena izophindwa izikhathi eziningi). Xhuma isihlungi nenaliti ku-syringe bese ujova ku-vial oyinyumba.
Pushisa isixazululo ngokusebenzisa isihlungi se-syringe ku-vial ngokusebenzisa ukucindezela okuthile kuyo. Ungasebenzisi ukucindezelwa okuningi ngoba lokhu kungahlukanisa isihlungi se-syringe futhi ungaphelela ekuthumeni.
Uma uqaphela ukuthi inqubo yokuhlunga ihamba kancane, ungashintsha izihlungi zesipringi njalo uma usuqedile ukuhlunga i-40ml
Isinyathelo 6: Zibophe nge-caps off caps
Uma usuqedile ngenqubo yokuhlunga, thinta isixazululo.
Ngokufingqiwe, inqubo ye-Trenbolone e-homebrew njengoba kukhulunywe ngenhla, isinyathelo sokuqala osithathayo ukukala i-Trenbolone Enanthate powder ku-beaker yeglasi bese wengeza i-Benzyl Benzoate ne-Benzyl Alcohol (Ungathenga i-trenbolone enanthate powder online kusuka kwezinye umthengisi we-steroids powder). I-Trenbolone eluhlaza iqala ukuchithwa ku-powder, kodwa uma ufuna ukusheshisa inqubo, ungashisa ubhontshisi emanzini okugeza. Amanzi akufanele ashise kakhulu kodwa afudumele ngoba izinga lokushisa eliphakeme kakhulu lingabangela uketshezi.
Engeza amafutha okugcoba afudumele abe yingxube bese uwaxuba kahle. Qiniseka ukuthi ayikho i-hormone swirls ngaphambi kokuqhubekela phambili kuhlelo lokuhlunga. Dweba isixazululo ku-syringe enkulu noma encane (lena izophindwa izikhathi eziningi). Xhuma isihlungi nenaliti ku-syringe bese ujova ku-vial oyinyumba.
Uma uqaphela ukuthi inqubo yokuhlunga ihamba kancane, ungashintsha izihlungi zesipiringi njalo uma usuqedile ukuhlunga i-40ml. Uma usuqedile ukhetha isixazululo.
I-Trenbolone Enanthate Izinzuzo
Nazi izinzuzo ezimbalwa ze-Trenbolone Enanthate eziletha etafuleni uma unquma ukuyisebenzisa.
-Inikeza ukukhula okusheshayo kwemisipha
-Qala amazinga e-cortisol emzimbeni.
-Ngena ngemvume ukulahlekelwa kwamafutha
Ihlinzeka ngokukhula okusheshayo kwemisipha
Ukusebenzisa i-Trenbolone Enanthate kuyindlela enhle kakhulu yokukusiza ukuba uqaphele amandla akho okugcwele uma usukulangazelela ukuthola ukukhula komzimba okusheshayo.
I-Trenbolone Enanthate Akungabazeki ukuthi kuwusizo kakhulu ekukuvumela ukuba usike ngenkathi ugcina ubuhlungu besisindo somzimba phakathi nesigaba sokusika.
Ngokungafani namanye ama-steroids anesisindo somzimba wakhe ngenxa yokugcinwa kwamanzi, i -Trenbolone Enanthate ukuzuza kwesisindo iwumphumela wokukhula kwe-nitrogen, okuholela ekukhuleni okuqhubekayo kwemisipha.
Lawula amazinga e-cortisol emzimbeni.
I-Trenbolone Enanthate ilawula inani le-cortisol elikhiqizwa ngakho-ke likhulisa ukuphulukiswa nokuphulukiswa okwandisa ekuqiniseni kwabo ngesikhathi sokuzivocavoca.
Usizo ekulahlekelweni kwamafutha
Ngesikhathi sokuqeqeshwa, abagijimi abaningi bakhetha ukusebenzisa lokhu njengomthombo wamandla esikhundleni sokudla isitashi esingaholela ekuzuzeni isisindo.
Ukuba ohlwini lwabanamandla kakhulu i-steroids, I-Trenbolone Enanthate kufanele isivele ingenye ye-steroids yakho ozithandayo. Uma uhlela ukuqala ukuyisebenzisa, lokho akufanele kukukhathazeke. Ungase uthathe isinqumo sokuwuqeda noma ukuthenga i-Trenbolone Enanthate online.
I-Anabolic Steroids futhi Ukwenza, uProfesa Frank, ikhasi 1-47
Ama-anabolics angaphansi komhlaba, uWilliam Llewellyn, uRonny Tober
Ama-Anabolic, uWilliam Llewellyn
I-2019 Indlela yokwenza isivinini se-testosterone se-enanthate ezinyathelo ze-6 DECA powder-Ultimate Guide Indlela yokwenza iNandrolone Decanoate (Durabolin)